Soso-kevitra: Ahoana ny fomba hahitanao sary mitovy amin'ny sary ao amin'ny tranokalan-tsarinao amin'ny fikarohana sary Google | Martech Zone
Mampiasa matetika ny fikambanana rakitra fisie manana fahazoan-dàlana sy misy amin'ny alàlan'ny tranokala sary. Tonga ny fanamby rehefa te-hanavao ny antoka hafa ao anaty fikambanana izy ireo mba hampifanaraka ny endrika sy ny marika mifandraika amin'ny sary na sary famantarana navoaka teo aloha.
Indraindray, izany dia mety vokatry ny fiovan'ny vola ihany koa… indraindray ny mpamorona vaovao na loharanom-pahalalana ho an'ny masoivoho dia mandray ny atiny sy ny ezaka famolavolana miaraka amin'ny fikambanana. Vao tsy ela akory izay no nitranga taminay rehefa nandray ny asan'ny orinasa izahay ary nanampy azy ireo tamin'ny fananganana atiny.
Ampiasao ny fikarohana sary Google hahitanao ireo mpamorona toa izany ao amin'ny tranokalan-tsarin'ny stock
Ny tetika tiako hozaraina amin'ny rehetra dia ny fampiasana ny fikarohana Google Image. Ny fikarohana sary Google dia ahafahanao mampakatra sary ary mamaly miaraka amin'ny sary mitovy amin'izany manerana ny tranonkala. Ny hitsin-dàlana iray, dia ny ahafahanao mikaroka tranokala manokana… toy ny tranokala sary.
Izaho dia mpifanerasera sy mpanjifa efa ela an'ny Depositphotos. Izy ireo dia manana sary tsy mampino, rakitra fisie (EPS), ary horonan-tsary ao amin'ny tranonkalany miaraka amin'ny vidiny sy fahazoan-dàlana miavaka. Ity misy fomba fampiasako ny Google Image Search hahitako ireo vohikala fanampiny ao amin'ny tranokalan'izy ireo izay mitovy amin'ny volon'izy ireo.
Ho an'ny ohatra etsy ambony, mila manondrana ny sariko aho aminà endrika png na jpg hampidirina ao amin'ny Fikarohana sary Google:
Ahoana ny fomba hikarohana tranokala misy tahiry ho an'ireo mpamorona mitovy amin'izany
Ny dingana voalohany dia ny fampiasana Fikarohana Google an'ny Google. Ny rohy ho an'ity dia eo amin'ny zoro havanana ambony amin'ny pejy fandraisana Google.
Google Image Search dia manome mampakatra kisary ahafahanao mampakatra ny sary santionany izay tadiavinao.
Fikarohana Google an'ny Google manome kisary fampakaram-pahefana ahafahanao mampakatra ny sary santionany izay tadiavinao. Misy ihany koa ny safidy hametahana URL sary raha fantatrao ny toerana ipetrahan'ny sary eo amin'ny tranokalanao.
Ankehitriny ny Pejy valin'ny fikarohana sary Google hanome ny sary. Mety misy koa ireo teny metadata tafiditra ao anaty fisie sary.
Eto no misy ny fikafika… azonao ampiana a masontsivana fikarohana mitady fotsiny ao anaty tranokala tokana mampiasa ity syntax ity:
Raha azo atao, azonao atao koa ny manampy teny hafa raha tianao, fa matetika aho tsy rehefa mikaroka vatan-kazo mba hahitako ny tranomboky feno vongana mitovy aminy ampidinina sy hampiasaiko.
The Pejy valin'ny fikarohana sary Google tonga miaraka amin'ny valin'ny valiny izay mitovy amin'ny sary voalohany. Afaka mahita ny vector tany am-boalohany ao anatin'ny valiny koa ianao!
Afaka mijery fotsiny aho izao Depositphotos avy amin'ireto valiny ireto dia tadiavo ireo sary na tranomboky izay mitovy, ary ampiasao izy ireo ho an'ny endrika fanampiny noforoninay ho an'ny mpanjifa!
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy afiliana ho an'ny Depositphotos ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: marikadepositphotosEPSfikarohana sary googlefari-pikarohana googlesarytranokala fikarohanatranonkala fikarohanasary stockstock vectorrakitra fisie